Ngagharị iwe nke ndị ọrụ ugbo: ndị ọrụ ugbo attentiona ntị na ndị ndu ngagharị iwe gị abụghị ndị ọrụ steeti: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 16 October 2019	• 5 Comments
A jụrụ m n’oge na-adịbeghị anya ma m chọrọ ịkwado ngagharị iwe nke ndị ọrụ ugbo. Eji m azịza dị nkenke ma doo anya. N'ezie ana m akwado ngagharị nke ndị ọrụ ugbo, mana anyị ekwesịghị ịgakwuru ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'ihi na ọ bụ nsogbu ahụ 'na mbụ'. Mkpesa na Netherlands abụghị ihe karịrị ike zuru oke. Youkwesiri inwe ikike; kwuo kpọmkwem site n’oge ruo n’oge gịnị; ya na ole traktọ na Malieveld; gbara okirikiri nke ndị ọrụ uwe ojii, ndị niile nọ na uche nke ntị ha. Emela ihe ọzọ! Naanị ihe na-arụ bụ naanị ịgbanye iwu niile. Ma ị gaghị akpọ nke a, maka na ọ ga-ata gị ahụhụ.
Emegogoro m ka ụmụ ehi niile si n'okporo ụlọ na ahịhịa na-atapụ nakwa na nde nde ehi na ezì na-ejupụta n'okporo ụzọ. Ka anyị hụ ihe nke ahụ na-akpata ọgba aghara!
N'ezie nke ahụ agaghị eme. Ndi oru ugbo aghaghi ime nke ahu, nihi na obu ihe ahu ha choro ga enweta. Ọ bụrụ n’anyị enweta ọgba aghara, mgbe ahụ nke ahụ bụ ihe steeti chọrọ. Ntughari nke Pegida na Antifa odida kpamkpam. Mkpali nke ụmụ amaala megide ndị Alakụba Ala Ala ọhụrụ (n'ezie abụghịkwa ndị bịara ọhụrụ) adala. Ọ ga-eme ka nsogbu ndị a na-ewu ewu kwụsị! Agaghị agba ndị Dutch ọkụ n'ihu. So i choo ogbaaghara dika obodo? Mgbe ahụ enwere otu ụzọ. Na-akụ otu ahụ nke nwere ụfọdụ bọọlụ: ndị ọrụ ugbo. Ha nwekwara akụrụngwa dị mkpa iji mepụta ọgba aghara. Site na ọgba aghara ị mepụtara usoro. Nke ahụ bụ ọchịchị ndị Rom oge ochie. Ee, ndị m hụrụ n'anya: steeti chọrọ ọgba aghara!
Steeti chọrọ oge alibis ọzọ iji nwee ike iwulite steeti ndị uwe ojii. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọkụ na-acha odo odo maka ibuga akụrụngwa buru ibu na Netherlands, ịchọrọ onye iro. Emepụtawo onye iro ahụ nke ọma ugbu a site n'ime ka ndị na-eme iwe na -ewe iwe n'ihi arịrịọ na-agaghị ekwe omume banyere nkwekọrịta nke Jehova ikuku nitrogen. Ya mere, ka anyị kwuo ya: Ndị ọrụ ugbo a na-emegbu gị maka ọgba aghara nke ndị alibi ga-enye maka iwulitekwu steeti ndị uwe ojii.
Gọọmentị chọrọ idokwa ndị agha ma nwee ụfọdụ ugbo ala mara mma iji dị ebe a na ebe a. Y’oburu n’inwere ndi agha adighi ike (wezuga nke onwe ya) adịgboroja nke Mocro mafia - alibi ọzọ maka steeti ndị uwe ojii ọzọ), ịnweghị ezigbo ihe mere ị ga - eji bulite ndị uwe ojii na - echekwa ndị isi megide ndị mmadụ.
Kedu ihe kpatara steeti ji achọ ihe niile? Gịnị kpatara gọọmentị ga-eji wuo steeti ndị uwe ojii? Gịnị kpatara na ha ga-ebu ụzọ mee ọgba aghara maka nke ahụ? Ọfụma, ihe ọ bụla ị nwere ike ịrụ na ndị uwe ojii na ndị agha, ndị a na-achịkwa ma nwee ikike, na-ahụ na ị ga-ejide onwe gị ma ọ bụrụ na ire ọkụ echt egwu na nde mmadu echt na-arịa ọrịa nke fesaa. A na-ewere owuwu nke steeti ndị uwe ojii dị ka 'ọ dị ha ezigbo mkpa'. Oge na-abịa mgbe ndị mmadụ echt na azụ gị na mgbidi ma ịchọrọ ọtụtụ (ọtụtụ) ndị uwe ojii na ndị agha ụbụrụ gbalaga, jiri ọtụtụ ngwa ọgụ na akụrụngwa buru ibu.
Ndị Hague, 12 October 2018
Mgbanwe ndozi nke ugboala ugboala nke ana aru oru dika ndi obi ugboala (DVOW) bu ndi edochi anya ndi ochie nke ugbo ala dika DAF, Mercedes Benz na Landrover, ma nwekwaara ihe ndi edobere nye na nchedo ndi ahu. Site na leta a, m na-agwa gị maka nyochaghachi nke usoro DVOW nke eji azụ ụgbọ ala ndị ọzọ. Nzụta a ga-edozirịrị oghere ndị eji arụ ọrụ ma bulie ike ndị agha.
Ekwenyesiri m ike na 99% nke ndị ọrụ ugbo na-esonye na ngagharị iwe a bụ eziokwu. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ọtụtụ ndị enweghị mmasị na ya. Vidio dị n'okpuru ebe a bụ ihe atụ dị egwu banyere nke ahụ! Enwere m ihe karịrị ndị a. Naanị ajụjụ bụ ndị isi abụghị ọnyụchaala nke steeti ngagharị iwe dị otu a.
N'ọnọdụ ahụ, m na-adụ ọdụ ka ndị ọrụ ugbo na-ele fim ahụ "Surrogates" ya na Bruce Willis ma hụ otu esi eme ka mgbagha na-abụkarị ndị na-achịkwa ike ike. Nke ahụ bụ ụkpụrụ dị mgbe ochie. Ndị dị ike maara na ndị mmadụ ga-enwekarị inupụ isi, yabụ ha na-azụ pawns nke ha kwere ka ha banye n'otu ụfọdụ. Ọtụtụ iri nkwadebe nwere ike ibu nke a ụzọ, n'ihi na nna ukwu edemede (lee nke m akwụkwọ ọhụrụ) edemede ochie nke narị afọ. Nke a na-enye ike oge idobe pawns ya n’okpuru ndi okachamara na ndi mmadu n’iile (site na ndi nzuzo). Yabụ ya Vladimir Lenin (onye na-eduzi mgbanwe Russia ma nwee ike itinye ego ụgbọ oloko jupụtara na ọla edo nke Zionist): Thezọ kachasị mma iji chịkwaa mmegide ahụ bụ idu ya n'onwe gị!
Ndi oru ugbo a, ekwerem na, kpachara anya mee ihe banyere iwu ohuru, nihi na steeti achoro mgbaghara a ga -eme ka ewee mee ka odi n'ihu ndi ozo wee nwee ike iguzobe steeti ndi uwe ojii. Akwụkwọ edemede ukwu ahụ bụ: ọgba aghara mbụ na Europe; wee weghachi usoro. Na-agụ lee onye na-enye iwu ga-abịa gbakee.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: officielebekendmakingen.nl, volkskrant.nl, volkskrant.nl
Ole ndị bụ ọgụ na-acha odo odo na Paris? Ihe ntinye ihe ngosi vidiyo
Hụ otu mkpesa gị
Ihe ngosi nke Pegida The Hague 10 April 2016 gosipụtara kpam kpam adịgboroja (foto na vidiyo)
Tags: ndi oru ugbo, Nchekwa-obosara, DVOW, agba, nkwa, nzọ, leger, Malieveld, Maliveld, Ọrụ, nnupụisi, ngagharị iwe, mkpesa, ndị ọkwọ ụgbọala, Dochie, Vehiclesgbọ ndị a pịrị apị
16 October 2019 na 07: 01
Ndụmọdụ dịịrị ndị ọrụ ugbo:
Lelee ma ndị isi ndị na-ekwugide gị bụ ndị otu nnwere onwe na-aga ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, klọb dị ka klọb Lions (nhapụ ndị obodo nzuzo).
16 October 2019 na 14: 23
Ochichi obodo na Madurodam? Ọ bụ na anyị abụghị naanị ịgafe Vrijland ...?
ps: echefula Rotary club 😉
16 October 2019 na 15: 48
dị ka Nederlandsche Propaganda Omroep si kwuo, nke a bụ ọmụmaatụ nke akụkọ adịgboroja:
"N'ezie osisi enweghị akụkọ ahụ. Ternyaahụ enwere ndị ọrụ nkịtị ka ha gosipụtara na ngosipụta a, mana ha nọ ya naanị "inyocha", ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii Steven van Santen kwuru. “Ndị uwe ojii agaghị anwa ime ihe ike. Ọrụ ha bụ kpọmkwem iji gbochie ọnọdụ ahụ ịpụ n'aka. "
16 October 2019 na 18: 08
"Ọ dị mma, mana anyị maara ugbu a na ị gaghị ajụ anụ nke gị"
16 October 2019 na 18: 38
ọ bụkwa naanị otu a ka ọ dị ... ordo ab chao
Mkpesa: gọọmentị chọrọ 'agha obodo'
" Ruinerwold Drenthe na ezinụlọ ya, ọrụ mmụọ na-esote (PsyOp) kwupụta steeti ndị uwe ojii
Ndị 'mmụọ ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii' »
Nleta nile: 13.776.940
guppy op Mmegide a ha amalitela? Enyerelarị mmụọ ọgụgụ isi na 2018 dabere na ikpe Els Borst / Bart van U.
Mmiri op Robert Jensen "Donald Trump ekweghị na New World Order" na-egosi: Jensen.nl bụ ndị mmegide na-achịkwa
Chekinah op Mmegide a ha amalitela? Enyerelarị mmụọ ọgụgụ isi na 2018 dabere na ikpe Els Borst / Bart van U.
SandinG op Onye akaebe na-ahụ maka okpueze na egwuregwu dị n'etiti mpụ steeti na onye nnọchi anya (ọkàiwu Meijering megide Plasman)
Jikọọ ndị 1.681 ndị ọzọ debanyere aha